Nge-bio umuntu odumile ngokuvamile ebhukwinitifundvo ajwayelekile ku-athikili. Phakathi naleso sikhathi, ukuphila kwamadoda omkhulu Ziningi ezithakazelisayo. Khumbula, lapho wamangaza abantu bangesikhathi sakhe futhi inzalo ka imbongi Russian NA Nekrasov.
Isifundo esikoleni esiphakeme
Lapho ngineminyaka engu-nanye Nicholas nomfowabo omdala bathunyelwa Yaroslavl esikoleni. Okokuqala Nekrasov wayehlezi emgqeni phakathi abafundi engcono. Kodwa kungakapheli sikhathi, ngase ukuzikhohlwa impumelelo. Lo mfana akazange uthanda gaya nasendleleni enihlela ngayo izinto, waba ngukumkani sokuzivocavoca. Ngaphezu kokwengamela Barchukov umfana ngokuphelele wahlanganyela imfundo yabo, futhi izinyanga abakwazanga avele ekilasini. Kodwa UNikolai ngokushesha baba umphefumulo inkampani.
Akuyona imfihlo ukuthi ebuntwaneni Nekrasova Nikolaya Alekseevicha lidlule eduze izingane ongumlimi. Wenza e a ngokhuni kocingo maphutha lapho waphuma engadini wagijimela abangane bakhe. By endleleni, abaningi babo akukhulumile nsizwa, lapho efika Greshnevo kusukela Petersburg. Futhi manje, ngesikhathi sekhefu, wabutha emhlabeni isikhungo sokuzivocavoca futhi waqala ukutshela izindaba eziphathelene nokuphila kwakhe ngesikhathi kule ndawo. M. Gorshkov, owayefundelwa kanye Nekrasov, wakhumbula ukuthi ngisho nangaleso sikhathi zonke izitatimende imbongi owawuqondene nabantu.
Wonke umuntu ejwayelene imbongi Nekrasov, kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi ngemuva kokuhluleka kushicilelwe iqoqo lokuqala izinkondlo, "Amaphupho umsindo" UNikolai wabhala eziningi tindzaba letimfisha kanye amanoveli, inyatheliswe "Literary iGazethi" futhi "onkulunkulu". Ngesisekelo iningi labo sewenze Petersburg abafana sizi oholele ngenkathi impendulo eshubile kusukela abavamile. Isimo saleli eminye imisebenzi emazweni aseningizimu owaqala ngokuvukela Ibala, ezo, abesifazane amahle, njll Sekuvele kubonakele, Nikolay Alekseevich Nekrasov, omsebenzi wakhe imelelwa uhlobo olusankondlo, ebuzwa abamemezeli ukuba uzitholele temibhalo yephrozi netindzaba bakhe, ngaphandle, mhlawumbe, "i-Petersburg emakhoneni" nesithi "Izacile Man".
Ngo-1841, e "iphephandaba Literary" livela vaudeville "Ekuseni kumagama." Nekrasov wawubhala sasivumela kalula, esekelwe inoveli B. Narezhny Ngokushesha yacala play yaseshashalazini wase-Aleksandriya. Ngoba kuqala Kwalandela eminye vaudeville ezintathu. Nakuba zaphumelela, emva engu-45 imbongi Nekrasov iminyaka eminingi ukulishiya ngokuphelele lolu hlobo. I last imisebenzi amadlingozi UNikolai baba sidle "Bear Hunt" (1867).
iphakethe lensiza yemethadatha
ukuphila Siqu Nikolaya Alekseevicha Nekrasova kwakuhambisana nezinga Panaeva umndeni iminyaka eminingi ezayo. Lezi zaguga zabe akajabuli kakhulu emshadweni, futhi Avdotya Yakovlevna njalo saba nempumelelo ezintweni zomhlaba. Imbongi sifisa futhi umhleli we- "Contemporary" eside wafuna ukunakwa ubuhle. Ekugcineni, Avdotya Yakovlevna waphendula UNikolai bangasabeli, cishe ngo-1847. Iminyaka eyishumi nesithupha babehlala mshado wasehhovisi - Panaeva hhayi isahlukaniso - yini eyabangela eziningi inhlebo. Ngo ubudlelwane Nekrasov futhi Panaeva kwadingeka izikhathi eziningi happy, njengoba kufakazelwa uthando izinkondlo somlobi. Nokho, ngenxa yesimo esinzima nomhawu zokucabanga okubangelwa isifo uNikolai lapho kamuva ingezwe ukugula okungathí sina, phakathi kwabo ngokuvamile kwadingeka ukuxabana, sisincane unyaka 55-th. Nakuba eminyakeni eyalandela Nekrasov futhi Panaeva namanje bahlala ndawonye, ukuluqonda wangaphambili wayengaselona phakathi kwabo. I azihlukanisa unomphela wangena 1863.
Z njalo bakhangwa abantwana bakwa-abalimi. Kuyeza Greshnevo, wayemthanda ukuwabuka ukudlala futhi endawonye. Nokho, nezingane zabo ukuba imbongi babengenalo inhlanhla. Ingane yokuqala Panaeva Nekrasov wafela 49th ngemuva kwamahora ambalwa lokuzalwa. Indodana yesibili, u-Ivan, uye wahlala izinyanga ezine. Ukufa kwakhe omunye izizathu Ukuwohloka ubudlelwane phakathi imbongi nesithandwa sakhe ngonyaka 55th.
Okuholela amanye amaqiniso athakazelisayo nokuphila Nekrasov, singakhumbula umkhiqizo "amazwe amathathu zezwe". Ngonyaka 48, lapho ibutho ukuphendula, futhi "Contemporary" Kwase kusele kancane lokuvala, uNikolai aphakanyisiwe Avdotya Yakovlevna ndawonye ukuze ubhale inoveli kuleli zwe. Abaningi asabela ngayo lapho umqondo abakwethembi, ikakhulukazi njengoba babungekho izincwadi Russian. Nokho, co-abalobi Uchaze umbono umkhiqizo, sketched kwesiqinti, umkhiqizo wafika ngempela ukukhanya. Kwaphela izinyanga eziningana iminyaka 48-49, lanyatheliswa ngo-lo "Contemporary", okuyinto axazulula inkinga ngokuqukethwe layo.
I-eseyi yesibili, "Dead Lake", kwaba ngaphansi yimpumelelo - ngakho cishe akazange iqhaza indalo yayo - isikhathi esikhulu kule magazini kushiya ingcosana kuphela isikhathi khulula.
Rhode Nekrasov wayesemdala, kodwa mpofu. Uma, engxoxweni ubaba eyabakhipha amaqiniso athakazelisayo zokuphila. Nekrasov, njengoba kuvela, kungekho ngozi ukhangwa amabalazwe. Praprapradeda ka UNikolai elahlekile serfs eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, ukhokho - amabili, Umkhulu - eyodwa. Futhi uyise imbongi kakade zicishe zakhubeka. Ngakho abanothando umdlalo kwaba isizathu ukuthi umndeni kanye ocebile yalahlekelwa ingcebo yayo.
Ukuze Z sika wonke waqala ngo-1854, lapho yena Panaev baba amalungu English Club. Kusukela ngaleso sikhathi imbongi ngokuvamile ubusuku bakhe etafuleni embozwe baize oluhlaza. Abantu abadlala nge UNikolai Alexeevich, waphawula ukuthi akazange alahlekelwe ukuzithiba yakhe nokukhuthazela. Njalo walinganisa amathuba futhi wakwazi ngesikhathi esifanele ukumisa. Mhlawumbe ngoba enza kangcono kakhulu ukwedlula oyise ngezono zabo - wayinqoba lemali kahle esikhulu. Imali waya uhlinzeke ehloniphekile lokube nawo ezingeni lekuphila, ukusiza izihlobo, kuhlanganise noyise, futhi ubhoko "Contemporary".
abazingeli nge zinja
Amaqiniso ethakazelisayo Nekrasov elihlobene ne ukuzingela. Kwakungesinye imisebenzi ozithandayo kayise, futhi lo mfana ingane wahamba naye emahlathini kanye namasimu. Lokhu abanothando abazingeli nge zinja waphaphama ngemva kokuvakasha lokuqala UNikolai e Greshnevo lwakubo. imbongi ajwayelekile batshelwa ukuthi Petersburg uyisicaba nezamanje isitoreji ruzhy Trophies, eziningi zazo yayigxishwe amabhere nge amathole amabili. , Futhi kamuva UNikolai A. Ukuzingela Greshnevo owabathenga ncamashi Karabikha noma nini yaphenduka ukugubha yangempela. Kulula ukukubona ngeso lengqondo konke kwaba kanjani ububanzi bangaki abantu abayozuza kulesi lusakhunjulwa, lapho imbongi wakwazi ukuthola nje amabhere amathathu.
Umlutha ukuze ekuzingeleni iphele ngokungalindelekile. Uma Thekla Viktorov, okuthiwa UZinaida udubuleke ngephutha ku inja othandwa uNikolai kado. Ukuze amagama awakwenzayo, cishe ngeke ayithethelele imbongi wathi, "Awuzange ukukwenza ngenhloso. Futhi endaweni ethile njalo abantu bosuku bayabulawa ngokuqondile. " Emuva ekhaya, imbongi ivalile isibhamu sakhe futhi ayisekho ayizange wathinta. Futhi ngasethuneni kothandekayo kado Nikolay Alekseevich wasungula setshe legwadle.
UZinaida Nikolaevna Nekrasova
Sina, ubuhlobo besikhathi eside, imbongi athuthukile abesifazane abathathu. Kodwa kuphela omunye wabo kwaba umkakhe olusemthethweni. Kwaba amabili nantathu intombazane elingadle ngabukhazikhazi, befuna ayehlangana nabo Nekrasov ngo-1870. Igama lakhe, Thecla, singafani uNikolai, waqala ukubiza UZinaida wakhe, futhi ngesikhathi esifanayo esikhundleni Anisimovna patronymic ku Nikolaevna. Nekrasov wafundisa lolimi wakhe, isiFulentshi, umculo. Yena wathandana ogibele ihhashi nokuzingela, futhi ngokuvamile inkampani imbongi.
Kakade nezibi, imbongi wamcela ukushada kunokushiswa kwabathukuthelisa zonke izihlobo zakhe. Bona, ngasendleleni, ungalokothi wathatha UZinaida, futhi ngemva kokufa UNikolai kanye nempahla esibanjiwe ilungelo okuqondene naye "Iculo Kugcine" Nekrasov.
Umshado kwenzeke ekhaya ngo-Ephreli lama-77, izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokufa imbongi.
Lawa amanye amaqiniso athakazelisayo nokuphila Nekrasova Nikolaya Alekseevicha.
Izingcaphuno ezinhle ezimayelana ukushisekela ubuzwe
I opopayi ethandwa kakhulu mayelana Dragons: incazelo ngesakhiwo
Izinhlobonhlobo Quads. Haircut bob-bob nge esiphongweni etshekile isikwele noma zakudala - lokho ukukhetha?
Ubuso eziningi zeYurophu. izindawo eziyisithupha uphumule elishibhile phesheya
Phindela izithombe ku-"Photoshop": imiyalo yabaqalayo